Oovimba be-NHL- Ilungelo laseMelika lokwazi
Ukunikezela Ingxelo Kwinkundla Yamatyala
ezaposwa ngomhla Februwari 25, 2019 by UGary Ruskin
Amaxwebhu avela kuSuku 1 kwityala likaHardeman athunyelwe apha.
Jonga iTranscript yenkqubo.
khangela Ummangali weSilayidi sokuVula iSilayidi kwaye Idesika yeSilayidi yokuVula iMonsanto
3: 30 pm -Ijaji igxothiwe yijaji kodwa amagqwetha kwityala lomhlaza i-Roundup asathetha ngokuba ubungqina bunokusetyenziswa okanye bungenakusetyenziswa njani. Usacaphuka ngenxa yegqwetha lommangali u-Aimee Wagstaff onesibindi sokuthetha malunga ne-1983 @EPA dox ebonisa ukukhathazeka komhlaza nge-glyphosate.
Ujaji utyhola u-Aimee Wagstaff kwakhona esithi ufuna ukumohlwaya i-1,000, XNUMX yeedola kwaye mhlawumbi neqela lezomthetho lommangali. Ukubiza isenzo sakhe "sisidenge ngokumangalisayo."
2: 30emva kwemini Thumela uhlaziyo lwasemini:
Njengokuba ityala likaMonsanto Roundup lomhlaza liqala kwakhona, ingqina lommangali u-Beate Ritz uthetha namajaji malunga nomngcipheko, ixesha lokuzithemba kunye nokubaluleka kwezibalo zesayensi yomhlaza. Ichaphazela ixabiso lohlalutyo lweemeta. @Bayer
Ugqirha Ritz unika ubungqina malunga nezifundo ezahlukeneyo ezibonisa ukwanda komngcipheko womhlaza kwi-glyphosate exposure.
Ummangali uEdwin Hardeman kunye nenkosikazi yakhe babukele ngokuzolileyo, kodwa ngexesha lekhefu bavakalise ukukhathazeka ngenxa yokuba ingakanani iJaji uChhabria enobungqina obulinganiselweyo bokuva kwejaji.
Indlela eqinisekileyo yomlilo yokubonisa inkcaso evela @Bayer Monsanto amagqwetha kulingo lomhlaza we-Roundup: khankanya @IARCWHO udidi lwesayensi lwe-glyphosate njenge-carcinogen enokwenzeka.
Usuku lokuqala @Bayer Monsanto Uvavanyo lomhlaza we-Roundup uqukunjelwa emva kobungqina obude obuvela kwisazinzulu u-Beate Ritz ohamba ngeejuri ngophando olubonisa umngcipheko we-NHL ekuvezweni kwi-glyphosate herbicides. Ijaji ibulela abagwebi ngokunikela ingqalelo; ibaxelela ukuba bahlale kude namajelo eendaba.
Inye kuphela imini kunye novavanyo lomhlaza we-Roundup ephulukana nejuror. Omnye wala madoda mabini akwi-jury uthi usebenza nzima; akanakho ukulahlekelwa ngumvuzo wakhe. Oko kushiya abafazi abasi-7 kunye nendoda e-1 yokuthatha isigqibo kwityala. Isigwebo kufuneka sibe ngamxhelo-mnye ukuze ummangali aphumelele.
11: 38 amUbungqina bomsindo wejaji xa kuvulwa umjikelo wesilingo somhlaza kumanyano: i-odolo yommangali yommangali ukubonisa isizathu sokuba kutheni engafanelekanga ukuba ahlwaywe ngentsimbi yesi-8 ngokuhlwanje.
11: 10 am IMonsanto / iBayer isongele ukuvulwa kwayo kwaye ngoku ilungiselela ubungqina bokuqala, isazinzulu sommangali uBeate Ritz. Olunye uhlaziyo kwisiteyitimenti sokuvula:
Igqwetha lommangali lifuna ibarbar esecaleni njengoko ezo ngxelo zazithintelwe yimiyalelo yaphambi kwetyala kodwa ijaji yamoyisa.
Ngoku igqwetha laseMonsanto libonisa itshathi ngelixa ukusetyenziswa kwe-glyphosate kuye kwanda ngaphezu kwamashumi eminyaka, amaxabiso eNHL akakhange enze njalo. Uthi emva koko @IARCWHO kudweliso njenge-glyphosate njenge-carcinogen enokwenzeka @EPA kunye nabalawuli bamanye amazwe abavumelani.
Igqwetha lezokhuselo leMonsanto @Bayer kuluhlu; Ukuxelela amajoni konke malunga neSifundo seMpilo yezoLimo, esingakhange sibonakalise manyano phakathi kwe-glyphosate kunye ne-non-Hodgkin lymphoma. Igqwetha lenza ukuba iMonsanto ayinanto yakwenza nesifundo.
10: 45 amNgoku ngu @Bayer Ithuba likaMonsanto lokuvula iingxelo- igqwetha uBrian Stekloff uxelela ijaji "I-Roundup ayikhange ibangele ukuba uMnu Hardeman's non-Hodgkin lymphoma."
Ijaji iyalela nje enye iMonsanto @Bayer isilayidi sisusiwe, siphazamisa isitetimenti sokuvula igqwetha lezokhuselo. Ukudlala ibhola ekhatywayo ngamacala omabini.
Igqwetha lommangali liyaphikisa kwelinye lamagqwetha eMonsanto; Ijaji iyavuma kwaye isilayidi siyasuswa. Ityala elenza igqwetha kwimbali kaHardeman ye-Hepatitis C enokubekek 'ityala nge-NHL yakhe.
Uxelela ama-jurors i-NHL luhlobo oluqhelekileyo lomhlaza kwaye uninzi lwamaxhoba eNHL ayingabo abasebenzisi beRoundup; akukho vavanyo ugqirha anokuluqhuba axelele isigulana ukuba isifo sakhe okanye asibangelwa yiRoundup.
10: 15 Uhlaziyo kumazwi okuvula egqwetha lommangali u-Aimee Wagstaff:
Ngoku ijaji isongela isohlwayo segqwetha lommangali kunye nokucinga ukuba ingavumi na ukuvumela ijaji ukuba ibone izilayidi zommangali. Ugqwetha ka @Bayer Monsanto uthi ewe. U-Aimee ucela ukulungisa ingxaki yakhe; Ijaji iyamsika.
Ijaji ngoku iyayigxotha i-jury ngekhefu kwaye i-RIP igqwetha lommangali-ithi "iwele umda" kwaye "ayilunganga kwaphela" kwingxelo yayo yokuvula. Uthi esi "sisilumkiso sakhe sokugqibela". Ungaze umzuzu otyhafileyo kwi @Bayer Uvavanyo lomhlaza weMonsanto Roundup.
Ujaji ukwamxelela ukuba "aqhubeke" xa ezama ukucacisa ukuba @EPA kuvavanya kuphela i-glyphosate kwaye ayiyiyo yonke imveliso.
Uvumelekile ukukhankanywa ngokufutshane kwe @IARCWHO Udidi lwe-glyphosate njenge-carcinogen yomntu enokwenzeka kodwa ijaji iyamsika ngaphambi kokuba athethe kakhulu.
Kwingxelo yokuvula ka @Bayer Igqwetha lommangali wommangalelwa iMonsanto Roundup likhomba kuhlalutyo lweemeta ezintsha ezibonisa ubudlelwane obunyanzelekileyo bomhlaza (jonga Ibali lomgcini).
Kwingxelo yokuvula yegqwetha lommangali lommangalelwa ojikelezayo ufunda ukusuka kwi1980s-era @EPA imemo "i-glyphosate ikrokrelwa" kwaye ihamba nebali lendlela iMonsanto eyenze ngayo inguquko yokuxhalaba kwe-EPA. Amajaji ajonge ukudideka yiyo yonke le nto yesayensi.
9: 35 am Ngoku igqwetha lommangali libalisa ibali lesifundo sempuku sowe-1983 esibangele @EPAscientists ukufumana umhlaza we-glyphosate obangela… phambi kokuba uMonsanto abaqinisekise ukuba bangakwenzi. yhu. Ujaji uyamsika kwakhona. Ibar esecaleni. @BayerMonsanto kufuneka ikuthande oku. Ngakumbi kuphononongo lwempuku luka-1983, jonga inqaku lika-2017, "Yeempuku, iMonsanto kunye neThumba eliMangalisayo."
9: 30 am Umxholo ophambili ngale ntsasa kukuba ijaji ayiniki ndlela igqwetha lommangali, nge @careygillam:
8: 49 am UMgwebi uChhabria ubonakalisa ukuqina kwangoko kolu vavanyo lomhlaza we-Roundup. Wayeka igqwetha lommangali u-Aimee Wagstaff kwimizuzu nje embalwa evulelwe ibar esecaleni. UWagstaff wavula ngokwazisa umfazi wommangali, waqala ukubalisa ibali lobomi babo kwaye uHardeman wafumana iqhuma entanyeni yakhe. Ijaji yaphazamisa ukuxelela uWagstaff ukuba abambelele kwizimvo ezijongana nengxaki kuphela.
8: 10 am "Inkundla ngoku iseshoni". Igumbi lenkundla lipakishwe ngenxa yeengxelo zokuvula kwilingo lomhlaza we-Roundup. Kwangoko kwilulwane, iMonsanto Bayer, kunye negqwetha lommangali sele zingquzulwano ngobungqina obuza kuziswa.
8: 00 am Kwaye sihambile. Kwiinyanga ezintandathu emva kwejaji yaseCalifornia yagqiba kwelokuba ababulali bokhula bakaMonsanto kubangele umhlaza womgcini wendawo, Elinye ijaji laseCalifornia lilungiselela ukuva iimpikiswano ezifanayo nxamnye neMonsanto.
Ngeli xesha kwimeko iyaxoxwa kwinkundla yomanyano, hayi inkundla yelizwe. Ngokubalulekileyo, ijaji ivumile ngesicelo esivela eMonsanto sokuba ityala lixoxwe kwizigaba ezibini ezinobungqina bokungakhathali kunye nokuziphatha okukhohlisayo okwenziwe nguMonsanto ngexesha lesigaba sokuqala ukuvumela ijaji ukuba ijolise kuphela kubungqina obunxulumene nombuzo wokuba ingaba okanye hayi iimveliso zenkampani zazibekek 'ityala ngomhlaza wommangali.
Ummangali u-Edwin Hardeman unesifo i-B-cell non-Hodgkin lymphoma, eyafunyanwa ngoFebruwari 2015, kwinyanga enye phambi kokuba i-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC) ichaze i-glyphosate, eyona nto iphambili kwi-Roundup yaseMonsanto nakwezinye iintlobo zeherbicide. Umhlaza womntu onokwenzeka.
UHardeman wasebenzisa iimveliso zeRoundup rhoqo ukunyanga ukhula kunye nokugqitha kwephecana elinamahektare angama-56 awayenayo eSonoma County. Amaxwebhu afakwe kwinkundla yomdibaniso malunga nokuvavanywa kukaHardeman kunokuba njalo fu maneka apha.
Abasetyhini abasixhenxe kunye namadoda amabini bakhethwe njengamajoni ukumamela ityala likaHardeman. Ijaji ithe eli tyala kufuneka liqhubeke ukuphela kuka-Matshi. Izolo uJaji Chhabria usikhanyele uMonsanto isindululo sesishwankathelo.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Isifundo sezeMpilo yezolimo, UAimee Wagstaff, B-iseli engeyiyo iHodgkin lymphoma, Ubetha uRitz, UBrian Stekloff, hepatitis C, Bee, ivumele
Umzuzu wokugqibela Ukuhamba
ezaposwa ngomhla Februwari 19, 2019 by UGary Ruskin
Ngaphantsi nje kweveki ukuba ihambe ngaphambi kokuvula ingxelo ngoFebruwari 25 kwityala laseburhulumenteni malunga nezityholo zokuba ababulali bokhula baseMonsanto base-glyphosate babangela umhlaza, amagqwetha omabini amacala ayelungiselela ukhetho lwejaji oluqala ngoLwesithathu.
Kwinkqubo yaphambi kokumanyelwa kwetyala ummangali u-Edwin Hardeman kunye neqela lezomthetho elimele iMonsanto, ngoku eyiyunithi ye-Bayer AG, sele bephikisana ngokukhethwa kwe-jury ngokusekwe kuphela kwiimpendulo ezibhaliweyo ezinikezwe ngabachopheli-tyala, kwaye uninzi sele lubethwe siSithili sase-US UMgwebi uVince Chhabria ngesizathu.
NgoLwesithathu, amagqwetha aya kubabuza buqu abaza kuba lijaji. Amagqwetha kaMonsanto axhalabile ngakumbi malunga nabameli abanokubakho abaziyo malunga nemeko yokuba iMonsanto ilahlekile ngehlobo elidlulileyo. Kwelo tyala, ummangali uDewayne “Lee” Johnson uphumelele isigwebo sejaji kumabango afana nekaHardeman - ukuba ukubulawa kweentsholongwane zikaMonsanto kwabangela ukuba ingeyo-Hodgkin lymphoma kwaye uMonsanto wasilela ukulumkisa ngomngcipheko. UJohnson wanikwa iirandi ezingama-289 ezigidi ngamajoni, kodwa ijaji kwelo tyala yasinciphisa isigwebo saya kwi-78 yezigidi.
Izibonda kule meko ziphezulu. Ukulahleka kokuqala kwabetha iBayer nzima; Ixabiso lesabelo lalo liphantsi phantse ngama-30 eepesenti okoko isigwebo kunye nabatyali zimali behleli bengabalulekanga. Enye ilahleko enkundleni inokubonelela ngesinye isibetho kwimali yentengiso yenkampani, ngakumbi kuba kukho malunga ne9,000 yabanye abamangali abalinde usuku lwabo enkundleni.
Ukulungiselela ukuvulwa kwetyala ngoMvulo kusasa, Ujaji Chhabria uthe ngoFebruwari 15 ukuva ukuba uyakwahlula bonke abagqatswa bejaji kwiluhlu lweMonsanto abathi bavile ngecala likaJohnson lokubuza imibuzo ethile malunga nolwazi lwabo lwelo tyala.
Phakathi kwabo sele behluthiwe echibini lejaji ngokusekwe kwimibuzo yabo ebhaliweyo yayiliqela labantu ababonisa ukuba baneembono ezimbi malunga neMonsanto. Ngelixa umgwebi evumelana nesicelo sikaMonsanto sokususa abo bantu echibini lejaji, wasikhaba isicelo samagqwetha ommangali sokuba ahlasele umntu oza kuba lijaji owathi ngokuchaseneyo - igqwetha labhala livakalelwa kukuba "bona (iMonsanto) banyanisekile kwaye iluncedo eluntwini, ”watsho ekholelwa ukuba i-Roundup herbicide kaMonsanto ikhuselekile.
Ujaji Chhabria uthe “Khange ndicinge ukuba ukhona umntu kwi-Bay Area oziva ngale ndlela….”
Kwelinye inyathelo laphambi kokumanyelwa kwetyala, amagqwetha macala omabini ayese-Australia elungiselela ubungqina obuvela kwingqina lommangali uChristopher Portier. IPortier ibonelela ngobungqina oburekhodiweyo bevidiyo kwangaphambili ngokubuza ngokuthe ngqo nangokubuza imibuzo. Wayecwangciselwe ukuba abekhona enkundleni buqu kwityala kodwa wahlaselwa sisifo sentliziyo ngoJanuwari kwaye waye wacetyiswa ngokuchasene nohambo olude lomoya oluya kufuneka ukuba luvele buqu.
UPortier lelinye lamangqina eenkwenkwezi zommangali. Wayesakuba ngumlawuli weZiko leSizwe lezeMpilo yokusiNgqongileyo kunye ne-Arhente yeZinto ezinobungozi kunye neRegistry yeZifo kunye nososayensi wangaphambili kwiZiko leSizwe lezeNzululwazi yezeMpilo.
Kwelinye inyathelo eliphambi kwetyala, iJaji uChhabria uthathe isigqibo ngoMvulo ngezindululo ezivela kubo bobabini ababandakanyekayo bobuphi ubungqina obuza kuvunyelwa bangene kunye nokungazukubandakanywa. U-Chhabria ugwebe ukuba kuyakubakho isigaba sokuqala setyala apho ubungqina buya kuncitshiswa kwisizathu. Ukuba ijaji ifumanisa ukuba iimveliso zikaMonsanto zabangela umhlaza kaHardeman kuyakubakho isigaba sesibini apho ubungqina bunokwaziswa ngokunxulumene nezityholo ngamagqwetha ommangali ukuba uMonsanto ubandakanyeke ekufihleni umngcipheko weemveliso zawo.
phakathi Izigwebo zikaChhabria zobungqina:
Ubungqina begqwetha lommangali lithetha ukuba uMonsanto ubandakanyeka ekubhaleni ngomphefumlo uncwadi lwenzululwazi alufakwanga kwisigaba sokuqala setyala.
Ubungqina okanye izinto zentengiso zikaMonsanto azifakwanga kuzo zombini izigaba.
Thelekisa phakathi kweMonsanto kunye nomzi mveliso wecuba ngaphandle.
I-imeyile evela kuMonsanto exoxa ngomsebenzi kunye neBhunga laseMelika lezeNzululwazi nezeMpilo ayifakwanga kwisigaba sokuqala.
Iingxoxo zokuba i-glyphosate iyafuneka "ukondla umhlaba" ayifakwanga kuzo zombini izigaba.
Amaxwebhu athile e-EPA akafakwanga.
Uhlalutyo olwenziwe yi-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando malunga noMhlaza ohlela i-glyphosate njenge-carcinogen yomntu enokwenzeka "ithintelwe."
Inqaku elinye lamagqwetha ommanqali aceba ukwazisa luhlalutyo lweemeta olubanzi uhlalutyo olutsha lwezesayensi Izinto ezinokubangela umhlaza kwi-glyphosate herbicides. Uphononongo lufumanise ukuba abantu abanokuchazwa okuphezulu kwi-herbicides banomngcipheko we-41% wokwanda kwe-non-Hodgkin lymphoma (NHL).
Ababhali bokufunda, oososayensi abaphezulu abaye basebenzisa iArhente yoKhuseleko lwezeNdalo njengabacebisi, utshilo ubungqina "Ixhasa ikhonkco elinyanzelekileyo" phakathi kokuvezwa kwe-glyphosate-based herbicides kunye nokwanda komngcipheko we-NHL.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, UChristopher Portier, Bee
Amafama Vs. IMonsanto: Izilingo zeGlyphosate
ezaposwa ngomhla Matshi 5, 2018 by UStacy Malkan
"IVeki yeSayensi" kwinkundla yomanyano iya kuthatha isigqibo sokuba ngaba amatyala omhlaza womfama aya phambili na
Hlaziya izinto ezivela kwinkundla yamatyala NguCarey Gillam
Ukukhutshelwa kukaDaubert Ukuva kuthunyelwe apha
Ukukhutshwa kwangoko: NgoMvulo, Matshi 5, 2018
Ngolwazi oluthe kratya Qhagamshelana noCarey Gillam (913) 526-6190; UStacy Malkan (510) 542-9224
ISan Francisco, iCalif .; Ngomhla wesihlanu ku-Matshi 5-Inkundla yomanyano yase-San Francisco kule veki iya kugxila kwisayensi ejikeleze esona sisibulala-zinambuzane esisetyenziswa kakhulu kwihlabathi, glyphosate, kwaye siya kugqiba ukuba amafama kunye neentsapho zabo baya kuba nakho ukuqhubeka namanyathelo asemthethweni ngokuchasene neMonsanto Co malunga nokukhathazeka ngomhlaza.
Engaphezulu kwe Ama-365 amatyala asalindiwe ngokuchasene neMonsanto kwiNkundla yeSithili sase-US eSan Francisco, efayilwa ngabantu betyhola ukuba ukubhencwa kwi-Roundup herbicide kubangele bona okanye abo babathandayo ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma, kwaye iMonsanto yagubungela umngcipheko.
Inkundla ibize iminyhadala ka-Matshi 5-9 njenge "veki yesayensi" kuba obona bungqina buza kuboniswa buza kuvela kwiingcali zesayensi yomhlaza, kubandakanya i-epidemiologists, i-toxicologists, kunye nabahlalutyi be-biomedical statistical ababizelwe ukuhlalutya uphando olufanelekileyo. Izazinzulu ziya kuthi thaca obona bungqina baphambili benzululwazi kuMgwebi wase-US uVince Chhabria, oya kuthi athathe isigqibo sokuba amatyala aya phambili okanye amisiwe.
Intatheli kunye nombhali uCarey Gillam wase-US Ilungelo lokwazi Uya kuba ubhloga bukhoma kumcimbi osuka kwindlu yenkundla. Landela izithuba zakhe apha: https://usrtk.org/live-updates-monsanto-hearing/
Bona kwakho: "IMonsanto ithi i-pesticides yayo ikhuselekile: Ngoku inkundla ifuna ukubona ubungqina," NguCarey Gillam, uMgcini.
UGillam ngumbhali we "Whitewash: Ibali loMbulali Wokhula, Umhlaza kunye noRhwaphilizo lweNzululwazi" (Isiqithi seendaba, 2017Ngokutsho kombutho woonondaba bezendalo, uMbutho Wezintatheli Zokusingqongileyo, Uphengululo lweShelf yeNcwadi.
UGillam ukwangumlawuli wophando wase-US Ilungelo lokwazi, umthengi kunye neqela labalindi bezempilo yoluntu. I-USRTK ithumela amaxwebhu kunye nohlalutyo oluvela kumatyala omhlaza we-MDL glyphosate Iphepha leMonsanto Papers.
Ilungelo lase-US lokwazi ngumthengi ongajonganga kwenza nzuzo kunye nombutho wezempilo woluntu ophanda umngcipheko onxulumene nenkqubo yokutya, kunye neendlela zeshishini lokutya kunye nefuthe kumgaqo-nkqubo woluntu. Ngolwazi oluthe kratya, bona usrtk.org.
Ukukhutshwa kweendaba, Pesticides umhlaza, Ukumanyelwa kukaDaubert, mafama, glyphosate, IMonsanto, Amaphepha eMonsanto, Bee